Goatemalà: Dokambarotra tsy mahasarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2020 17:46 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Desambra 2007)
“Miaina fa tsy maty” hoy i Claudia Navas tao amin'ny bilaogy Ordinaria Locura [es] , izay nanazavany ny antsipirihany momba ireo olana lehibe atrehin'i Goatemalà manoloana ny herisetra atao amin'ny vehivavy, hoy izy:
Mampanahy ny antontan'isa momba ny famonoana vehivavy ao amin'ny firenena, araka ny Polisy Nasionaly. Hatramin'ny 2 Oktobra 2007, vehivavy miisa 377 no nisy namono, isa azo antoka fa nitombo nanomboka tamin'izay rehefa mijery gazety isan'andro, samihafa ny anarana hitako ary maro amin'ireo no tsy mahatratra 18 taona.
Manoloana ireo antontanisa mampivarahontsana ireo dia nisy orinasa mpanao kiraro ao Goatemala namoaka fanentanana dokambarotra izay noheverin'ny bilaogera maro fa tsy mety. Manazava ny atin'ity dokambarotra ity ao amin'ny lahatsoratra antsoina hoe Poco hombre ny bilaogy iraisam-pirenena VISUALMENTE [es]. Ahitana ireo dokambarotra roa resahna ireo ihany koa ao amin'ilay bilaogin-dahatsoratra.
Ny 19 Novambra 2007 tany Goatemalà, nanao fanentanana ny fivarotana kiraro antsoina hoe MD mba hampiroboroboana ny modelina kiraro manaraka miaraka amin'ny teny filamatra hoe “natao imatesana.” Misy zazavavy maty mandry eo ambony seza lava ao amin'ny iray amin'ireo afisy, ary misy tovovavy iray hafa maty ao amin'ny tranom-patin'ny hopitaly eo amin'ny afisy iray hafa, samy manao kiraro vaovao be izy roa ary samy maty. Ny vehivavy maty ve no hampiroboroboana kiraro?
Nahatsikaritra i Desing Drink [es] tao amin'ny lahatsorany fa tena masira be mihitsy izany:
Miombon-kevitra amin'ireo mpanao gazety Goatemalteka maromaro aho izay nitsipaka ny dokambarotr'i MD, mihevitra izany ho tsy mendrika, indrindra nanomboka ny Andro Iadiana ny Herisetra atao amin'ny Vehivavy tamin'ny 25 Novambra lasa teo, fankalazana izay tsy tokony natao akory.
Nizara ny hevitr'izy ireo ihany koa ny Black Creative Box [es] :
Manao zavatra amin'ny fomba tafahoatra ve isika? Marina fa tsara kokoa ny maha be resaka amin'ny dokambarotra, saingy misy fomba hafa an-tapitrisany maro azo hanaovana fanentanana ho an'ny kiraro.
Nizara tao amin'ny bilaoginy ny tantaran'ny tovovavy iray (Wendy) novonoin'ny sipany tezitra taminy, sy ny fandàvan'izy ireo ilay dokambarotra eny an-dalamben'i Goatemalà ny Guatemalidades [es]:
… Tsy hividy kiraro ao amin'ny MD aho, satria maro ny Wendys any Goatemalà izay nahita ny nofinofin'izy ireo rava noho ny herisetra tsy voahevitra sy ny fametrahana endrika lamaody mampihomehy, ary ny fitiavana hivarotra ny tenany mba ho tonga “vehivavy” sy “vady” mendrika. Mampihena ny faharanitan-tsaina ny fironana mitovy amin'izany ary manome lanja ny vehivavy amin'ny haben'ny nonony sy ny haben'ny andilany. Maharikoriko ny fampiasana ny maty hivarotana satria mandrisika herisetra izany.
Nizara ireo ahiahy ireo ny La columna de Ana, tamin'ny filazany tao amin'ny lahatsorany Muerte Súbita:
Tokony esorina avy hatrany io dokambarotra io, izay naka tahaka dokambarotra mitovy ny any amin'ny firenen-kafa ary noraràn'ny vondrona mpiaro ny zon'ny vehivavy sy ny zon'olombelona avy hatrany satria felaka ho an'ny vehivavy Goatemalteka izany. Goatemalà no laharana faharoa eran'izao tontolo izao – aorian'i Rosia – ahitana vehivavy novonoina betsaka indrindra